बहसमा झम्क नेपाल— ‘सिन्धुपाल्चोक पुनःनिर्माणको अगुवाइ गर्दै छ एमाले’
| Nov-26,2015 06:49:28 Published
निर्माण सञ्चार भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका सिडिओ, जिविसका प्रतिनिधि, पुनःनिर्माणमा संलग्न सहयोगी संस्था, प्रविधिज्ञ, इन्जिनियर तथा प्रमुख राजनीतिक दलसम्बद्ध व्यक्तिसँग भूकम्पपछिको अवस्था, असर एवं पुनःनिर्माण कार्यक्रमबारे लिइने अन्तर्वार्ता शृङ्खला निर्माण सञ्चारले प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ ।
यस शृङ्खलामा हुनुहन्छ झम्क नेपाल । लामो समयदेखि सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा विकास–निर्माणदेखि समाज सेवामा आफ्नो अलग पहिचान बनाएका नेपाल अहिले नेकपा एमाले सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ— भूकम्प अतिप्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको अवस्था, भूकम्पको असर तथा क्षति मूल्याङ्कन एवं पुनःनिर्माण अभियानमा भए–गरेका प्रगतिमा केन्द्रित भई गरिएको छलफलको सारसंक्षेप—
सवाल— भूकम्प अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भूकम्पीय क्षतिको खास डाटा के हो ?
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भूकम्पले सबैभन्दा क्षतिपुगेको जिल्ला हो । धन र जनका हिसाबले नै ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेको यो जिल्लामा ३५६२ जना मानिसहरुको मृत्यु भएको छ । कूल ६६ हजार ४ सय ६० घरधुरी रहेको जिल्लामा ६६ हजार घरहरु त ध्वस्त नै भए । अहिले ती ६६ हजार घर ध्वस्त भएका पीडितहरु झन्डै ९५ प्रतिशत बढी मानिस घरबार विहीन नै छन् ।
सवाल— प्राथमिक अवस्थामा उद्धारका कामहरु कति प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न भएजस्तो लाग्छ ?
प्राथमिक अवस्थामै पनि राजनीतिक दल, स्थानीय तहमा जुटेका सबै सहयोगी हातहरुका आधारमा जिल्लामा प्राथमिक उद्धार त राम्रै भएको हो तर यो ठन्डीमा भने दुर्गम र उच्च हिमाली तहमा रहेका बस्तीहरुमा अहिले हिमपात, तुसारो, शीतले मानिसहरु कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । सरकारले न्यानो कपडा भनेर दिएको १० हजार बाहेक कुनै पनि थप राहतका काम भएका छैनन् ।
सवाल— भूकम्प पीडित जनताका गुनासाहरु त आइरहेका छन् नि ! सिन्धुपाल्चोकका सिडिओ ....ले ठुलो सिरुबारीका महिलाहरुलाई किन झपारेर पठाए ? जबकि उनीहरु चाडबाडकै मुखमा जमरा राख्ने ठाउँ छैन, अन्नअनाज छैन, पानी चुहन्छ बस्ने बास गतिलो छैन, हाम्रा लागि कुनै राहतको कार्यक्रम छन् कि दशैं तिहारमा भनेर सोधेका थिए, दिदीबहिनी आमाहरु रुँदै फर्कनुपर्दा जनताको सेवा गर्ने भन्ने राजनीतिक दल एमालेलाई कति चित दुख्यो, सिडिओलाई थप सजगता गराउने र पीडितलाई मल्हम लगाउने काम एमालेले किन नगरेको ?
जुन सिडिओले त्यसरी पीडित महिलालाई हपारेका थिए, उनी अहिले सरुवा भइसकेका छन् । यो प्रशासनिक तहमा बस्नेले पनि जनताको गुनासो सकारात्मक ढंगले सुन्नु पर्छ । हाम्रो पार्टीले त्यसको अगुवाइ गरेर प्रशासनलाई पनि अहिलेको पीडा कम गर्ने गरी राहतको काममा लगाइरहेका पनि छौं ।
सवाल— पुनःनिर्माण अभियानमा तपाईंको राजनीतिक दलको भूमिका कस्तो रह्यो त ?
अरु दलहरुको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा के कुरा गर्नु र । यो जिल्लाको पहिलो र अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेको नेकपा एमालेले नै जनताका दुखमा दिलोज्यान दिएर काम गरेको छ । भूकम्प जाँदा पनि कार्यकर्ताहरुका आफ्नो घर पनि त ढलेको थियो, उनीहरुका पनि आफन्त गुमेका थिए होलान्, तर ती सबैलाई बिर्सेर पनि उद्धार, राहत र अस्थायी आवासमा बास बसाउने काममा पनि हामी नै अगाडि देखिएका छौं । अरु दलहरु पनि सहकार्य गर्न आएका छन् ।
सवाल— सिन्धुपाल्चोकमा पुनःनिर्माण अभियानका नाममा संलग्न संस्था र सरकारका कार्यक्रम र प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ ?
सरकार र अन्य संस्थाका हकमा भन्नु पर्दा सरकारको काम त चितबुझ्दो छैन नै । प्रभावकारी पनि भएन । अन्य गैरसरकारी संस्थाहरु सक्रिय छन् । तिनको पनि नियमन र अनुगमन गर्ने, काम प्रभावकारी बनाउने र भूकम्प पीडितहरुलाई जसरी हुन्छ, जहाँबाट हुन्छ सहयोग पुर्याउने काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ । भने र चाहेजस्तो भने कुनै निकायबाट पनि भएको छैन ।
सवाल— मनसुन लगत्तै पुनःनिर्माणमा लाग्ने, पीडितहरुका लागि पुनर्वास गर्ने भन्ने थियो, हिउँदको चिसोले मानिसहरु मर्न लागिसकेको अवस्थामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भूकम्पपीडितहरुका लागि तत्काल चिसोबाट बच्नका लागि के कस्तो कार्यक्रम छ, चाल्दै छ, वा कस्तो छ ?
सरकारी तहबाट न्यानो कपडा वितरण भयो । तर पनि चिसो सुरु भएपछि सिन्धुपाल्चोककै ५/७ जना पीडितहरुले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ । यो चिसो पछि गैरसरकारी संस्थाहरु लागिरहेका पनि छन् । कतिपय गाविसमा प्रभावकारी काम भएका पनि छन् तर कतिपय गाविसहरु जुन् उच्च हिमाली भेकमा छन्, त्यहाँ प्रभावकारी काम नभइरहेको जनगुनासो आएपछि हामीले हाम्रै पार्टीको अगुवाईमा राहत वितरण गर्ने काम गरेका छौं ।
सवाल— सिन्धुपाल्चोकको नवनिर्माण यस्तो चैं हुनुपर्छ भन्ने कुनै खाका÷योजना छ तपाईंसँग ?
सरकारले घर बनाउने विभिन्न माडेल दिएको छ । स्थानीय जनताहरु फरक ढंगले बसोबास गर्दै आएका हुनाले उनीहरुको बानी अर्कै किसिमको छ । एकीकृत बस्ती विकासबारे कुरा गर्नु पहिले जनताका विविधता, फरक फरक संस्कृतिलाई पनि विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
जे होस्, अब भुगोलको वर्गीकरण गरेर मात्रै उच्च जोखिम क्षेत्रमा आवास नबनाउने, विकास जाने सम्भावना भएका ठाउँमा मात्रै आवासीय योजना बनाउने, बजारदेखि अस्पताल र स्कुल कलेज सम्मका लागि मापदण्ड लागू गराउने काम गर्नु पर्छ जस्तो हामीलाई लागेको छ ।
सवाल— एकीकृत बस्ती भनेको के हो ? कसरी सम्भव छ ?
सवाल— सिन्धुपाल्चोकको पुनर्वास अब कहिलेबाट चैं तुरुन्त थालनी हुँदै छ त ?
पुनर्वास तुरुन्तै हुनु पर्ने । सरकारले अहिलेसम्म पनि पीडितलाई आवासीया योजना, घर बनाउनका लागि दिने २ लाख दिने भनेको दिने कहाँबाट हो, लिने कसरी हो भन्ने टुंगो लगाएको छैन । त्यसैले यो ढिला भइरहेको छ । कतिवर्ष सम्म यसरी भूकम्प पीडितहरु घरबार विहीन भएर बस्ने हो यसले हामीलाई सारै चित्त दुखाएको छ । हैन कसैको केही सहयोग हुन्न भने त हामी स्थानीय ठाउँमै बरु सुरु गर्न सक्थ्यौं । एकदम ढिला भएको छ । यसले जनतालाई सारै मर्म पारेको छ ।